Mety halaina hiray koa ny lehilahy
Heverina mazàna fa mibahana loatra ao anatin’ny lehilahy ny fitiavana te hiray ara-nofo. Misy anefa ireo anton-javatra mety hahatonga azy tsy hazoto hiray. Isan’isan’izany ireto.
Manafosafo tena : Mahasalama!
Tsy ireo manana olon-tiana ihany no natao hianoka fahafinaretana ara-nofo. Ireo nisaraka tamin’ny olon-tiany,
Valim-panadihadiana medikaly, navoakan’ny profesora Ingrid Fleisher,
avy ao amin’ny oniversite ao Hambourg, no nilaza fa raha te-hihena ny vehivavy dia mila manome fahafinaretana ny lehilahy amin’ny alalan’ny vava no sady mitelina ny tsirinaina, rehefa miray ara-nofo. Nambaran’ity profesora ity fa mampihena avo 2 heny , mihoatra ny ezaka fampihenam-batana hafa, ireo fomba 2 ireo.
Rehefa nodinihina ireo singa mandrafitra ny tsirinaina dia hitan’ny profesora fa mitondra singa mamelombelona toy ny rano, ny vitamina C, ny “acide citrique”, ny “zinc” ny prôteina… tao anatiny. Ahitana singa antsoina hoe : “alcaline” ihany koa ao anatiny, izay rehefa mifandray amin’ny tavy dia mampitsonika azy ka mampihena.
Mampiasa ny hery
Tsy adinoina ihany koa anefa fa antoka mampihena ny fanaovana firaisana ara-nofo, noho izy mampiasa ny vatana sy ny hozatra samihafa ao anaty ao, miampy ny fipatrapatraky ny hatsembohana. Ny lanja izany mihena, ny fahafinaretana koa azo !